ओलीको चारैतिर बिरोध भैरहेको बेला नायक राजेश हमालले पनि दिए कडा जवाफ – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : काठमाडौं : सार्वजनिक चासोको बारमो अभिनेता राजेश हमाल सितिमिति मुख खोल्दैनन् । लामो समय सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहेका हमाल सामाजिक सञ्जालमा ज्यादा जसो समय आफ्नो जिउ देखाउन रुचाउँछन् । उनले हाल्ने पोस्टमा आफ्नै फोटोको बाहुल्य हुन्छ । यदाकदा भने सार्वजनिक चासोको बारेमा पनि बोलेको सुनिन्छ ।
आइतबार साँझ हमालले लामो भिडियो पोस्ट गरे । भिडियोमा उनले सरकार कोभिड १९ सिर्जित महामारीका सम्बन्धमा नेपालको राजनीति उदास रहेको टिप्पणी गरे ।
उनको भनाइ थियो ‘बेलायतको संसदमा नेपालले कोरोना भाइरसका कारण भोगिरहेको विपत्तिको विषयमा चर्चा चल्यो । तर हाम्रो संसदमा किन यो विषयको चर्चा मैले सुनिँन ।’
८ मिनेट लामो भिडियोमा हमालले भनेका छन्, ‘केही दिन अघि ब्रिटिशको संसदमा भएको छलफल सुन्ने मौका पाएको थिएँ । त्यहाँका सांसदले बेलायतका उपप्रधानमन्त्रीलाई भाइरसको नयाँ भेरियन्टले नेपालमा पारेको क्षतिबाट निस्कन के कस्तो सहयोग गरिरहेको छ भनेर जवाफ मागेका थिए ।
र जेजति गरिरहेको त्यो पर्याप्त छ कि छैन भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । अझ बढी सहयोग गर्न पर्ने हो कि भनेर पनि चासो राखेका थिए । बेलायत र नेपाल कुटनीतिक सम्बन्ध भएका पुराना मुलुक हुन् । यति मात्र नभएर बेलायतको रक्षा र सुरक्षाका लागि पनि नेपालीहरूले २ सय वर्षदेखि योगदान गरिरहेको पनि चर्चा चलेको थियो । ’
हमालले सो भिडियोमा नेपाललाई नै जोडेर एक सांसदले कोभिडका कारण नेपालका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको र बेलायतका प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न सक्छन् ? भनेर सोधेको पनि उल्लेख गरेका थिए ।
जसमा हमालले व्यंग्यात्मक हाँसो हाँस्दै ती सांसदलाई नेपालको राजनीतिको बारेमा जानकारी नभए पनि नेपालको बारेमा चासो राख्नु खुशीको कुरा भएको बताएका छन् ।
हमालले नेपाल सरकारले अहिलेको महामारीमा गम्भीरतापूर्वक काम नगरेको पनि गुनासो गरेका छन् । ‘विश्वले नेपालको बारेमा यो किसिमले चासो लिएको छ तर हाम्रो सरकार यो महामारीको विषयमा रत्तिभर पनि चिन्तित रहेको महसुस भएको छैन ।
हामी आफैं हाम्रो विषयमा चिन्तित छैनौं भन्ने सन्देश बाहिर गयो भने उनीहरूले हाम्रो जेजति चिन्ता गरिरहेका छन् त्यो किन गर्छन् ?’ त्यसैले हमालले सरकारलाई महामारीमा केन्द्रित हुन पनि आग्रह गरेका छन् । यसका लागि चाँडोभन्दा चाँडो खोप लगाउने दिशामा अगाडि बढ्न पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
Prevको-रोना संक्रमित बिरामिको आँखामा कालो, सेतो र पहेंलो ढुसीको संक्रमण फेला, कसरी जोगिन सकिन्छ ?
Nextसायद ५ मिनेछ छिटो भएको भए सुरजको ज्यान बँच्थ्यो…..